Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zase-Egypt » I-Egypt ibhengeza iseti entsha yezithintelo ze-COVID-19
I-Egypt ibhengeza iseti entsha yezithintelo ze-COVID-19
I-Egypt iyayiphelisa indibano enkulu, isika iivenkile kunye neeyure zokutyela ukucothisa ukusasazeka kwe-coronavirus
ICairo ilwa ne-coronavirus evuselelekileyo
Iindibano ezinkulu kunye neekonsathi zivaliwe kwisithuba seeveki ezimbini
Zonke iivenkile, iivenkile ezinkulu, iikhefi, iivenkile zokutyela, iimovie kunye neethiyetha ukuvala kwangoko
Ukuthetha kwinkomfa noonondaba namhlanje, EgyptInkulumbuso u-Mostafa Madbouly uthe urhulumente welizwe uthathe izigqibo ezibalulekileyo zokujongana ne-coronavirus ephinde yavuka njengoko kusondela iholide ye-Eid al-Fitr.
Inkulumbuso ibhengeze ukuba iseti entsha yemigaqo kunye nezithintelo ze-COVID-19 iyakwaziswa kwaye izakuhlala isebenza iiveki ezimbini ukunqanda ukusasazeka kwe-coronavirus ngeentsuku zokugqibela zeRamadan kunye nemibhiyozo ye-Eid.
"Ukusukela ngomso, nge-6 kaMeyi ukuya nge-21 kaMay, siza kuvala zonke iivenkile, iivenkile ezinkulu, iikhefi, iivenkile zokutyela, iimovie kunye neqonga ngentsimbi yesithoba ngokuhlwa ukunciphisa kakhulu ingxinano engqinwa kwezi ndawo," utshilo uMadbouly.
Iindibano ezinkulu kunye neekonsathi ziya kuvalwa ngelixesha, ngeelwandle kunye neepaki ezivaliweyo phakathi kuka-12 no-16 Meyi, utshilo uMadbouly. Imibhiyozo ye-Eid, eza kubanjwa ngomhla we-12 nowe-13 kuCanzibe, kulo nyaka iwela embindini wexesha lezithintelo iiveki ezimbini zikarhulumente.
Kwangelo xesha, inkonzo yonikezelo lwasekhaya iya kuvunyelwa… kodwa kwezi veki zimbini zizayo, naziphi na iintlanganiso, iinkomfa, iminyhadala, okanye imibhiyozo yobugcisa ayizukuvunyelwa nakweyiphi na into, "yongeze iNkulumbuso.
Isigqibo sikarhulumente siza njengoko i-COVID-19 iqala ukusasazeka kwakhona eYiphutha, kwaye phakathi koloyiko lomnye umhla obaluleke kakhulu kwikhalenda yamaSilamsi iyandisa ingxaki.